Buug taariikhda Norway ku saabsan | WWW.SOMALILAND.NO
”Taariikhda Norway 1814-1920” waa xirmo casharro loogu tala galay ardayda dugsiga dhexe dhigata oo ku waxbarta labada luqo norweejiga iyo afkooda hooyo. Xirmadan waxaa kaloo loo isticmaali kara waxbarashada dadka waaweyn, dadka hadda dhow dalka doolaal ku yimidna waxay u noqon karta xogwarran ay ku ogaalgalaan.
Ardayda waxay fursad u helaan inay casharada afkooda hooyo ku akhristaan, taasoo u suurtogelisa inay si qottodheer u fahmaan. Leylisyada qaarbaa afka hooyo lagu qoray si macallinka u labada luqo ku tababara iyo macallinka afka hooyo u dhiga ay uga kaaliyaan ardayda oo leylisyada ugalana shaqeeyaan. Waxay kaloo ardayda usii fa’deyn karaan arrimaha casharada ku saabsan Norway oo ay dalkooda hooyo u barbardhigaan.
Laylisyada badankooda waxa looga gol lee yahay in garashada luqada norweejiga lagu hanto si karti iyo aqoon agaasiman leh. Sidaa awgeed waxaa ardayda looga baahan yahay in xaaladda waxbarashada lagu jiro ay luqada oroh iyo qoraal ahaanba u adegsadan si firfircoon oo falgal ah.
Waxaa kaloo casharada lagu dhafay xiriirada ku nudan interettka si ay u helaan aqoon kororsi iyo garasho qottadheer. Taasoo fursad u siineysa inay ku tababartaan sida loo soo xigsado xogta kala duwan ee aqoonta. Ardayda badankooda waxay u baahan doonaan in lagu tababaro lagana caawiyo adeegsiga iyo ka faa’idey internetka
Buuga oo dhan halkan ayaad ka akhriyi kartaa (65 bogg)
Filed under: Norge, Norway, Taariikh |
« Sideebaa loogu noolaan karaa cudurka macaanka? Shirweynihii 2aad ee Kulmiye oo Hargeysa ka socda weli »